Balwa nokuntshontshwa nokuhlukunyezwa kwezingane ngewashi elisiza ukunqanda ubugebengu. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uSimpiwe Ntuli, omunye wabasunguli be-Izipho Zokuphila Tracking, eyenza amawashi okuqapha izingane, yaseMlaza, eThekwini, KwaZulu-Natali
Balwa nokuntshontshwa nokuhlukunyezwa kwezingane ngewashi elisiza ukunqanda ubugebengu. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
BEKUHLALE kumkhathaza ukuzwa izindaba zokwanda kwezigameko zokuntshontshwa kwezingane elokishini, kumphule umoya kakhulu ukuthi ezinye zazo ziyanukutshezwa noma zitholakale sezibulewe.
Ugcine ebonisana nomngani wakhe omdala ngokuthi yini abangayenza ukulwa nalesi sihlava ezweni. Baqhamuke kanjalo nomqondo wokuqala ibhizinisi elizosiza ukuxazulula le nkinga.
UMnu uSimphiwe Ntuli, waseMlaza, noMnu uSiyabonga Mngadi, waseSiphingo, eNingizimu yeTheku basungule Izipho Zokuphila Tracking, inkampani edayisa iwashi elisiza ukugwema ukuhlukunyezwa, ukuntshontshwa nokubulawa kwezingane, ikakhulukazi ezamantombazane.
UMnu uMngadi, umlingani kaNtuli e-Izipho Zokuphila Tracking
Echaza ngokusungula kwabo Izipho Zokuphila Tracking, eqale yaziwa ngeKV Track ngo-2017, uNtuli uthi wabona enecala ngokungenzi lutho ukulwa nokulahleka kwezingane elokishini.
Uthi okunye okwenza basungule Izipho Zokuphila Tracking wukubaluleka kokuthi abantu baseNingizimu Afrika babambe iqhaza emnothweni ngobuchwepheshe. Muzwe echaza.
“Ngibe sengibonisana noMngadi obesevele engene kwezamabhizinisi, ngamchazela ngomqondo ebenginawo. Wawuthanda sasesivumelana ngokuthi siqale leli bhizinisi ngokubambisana ukuze kunqotshwe le nkinga.
“Sibe sesixhumana nenkampani eyenza eyenza imishini ye-tracker, okuyiyona esenzela leli washi. Sayichazela ngohlobo lwewashi esasifuna ukulenza nokuthi sifuna lisebenze kanjani,” kulanda yena.
Iwashi le-Izipho Zokuphila Tracking lokunqanda ukwebiwa kwezingane
Uthi leli washi ukusebenza kwalo kuncike kwi-app ebizwa nge-iCruiseS, kanti ngalo umzali uyakwazi ukubona ukuthi ingane yakhe ikuphi nendawo futhi uma kwenzeka ilikhipha esihlakaleni kuthunyelwa umyalezo kule-app.
“Okunye okuhle ngalo wukuthi lenziwe ngendlela yokuthi noma lingangena emanzini liyaqhubeka lisebenze, linenkinobho ecindezelwa uma ubhekene nenkinga futhi ne-battery yalo inamandla njengoba ikwazi ukusebenza izinsuku ezintathu ungakaze (uyifake kwi-charger),” kusho uNtuli.
Yize abantu bekuthakasela ukuba wusizo kwalo kodwa kusekhona okubakhathazayo. Uthi: “Kuba nzima uma lifunwa wumuntu okude neTheku ngoba ukuze lisebenze, kumele sibonane nolithengayo ukwenza imicikilisho ye-app elisebenza ngayo, loko okwenza singakwazi ukulidayisela amakhasimende akude kakhulu okwamanje.
“Enye into eyinkinga futhi wukuthi njengoba sisebenza online nje, abantu abaningi abakabujwayeli ubuchwepheshe besimanje, ngakho kuyenzeka kwesinye isikhathi sithintwe ngamakhasimende (kodwa) agcine engalithenganga ngoba awakayethembi indlela esisebenza ngayo,” kusho yena.
Leli washi balidayisa ngoR900 ohambisana noR30 okhokhwa njalo ngenyanga. Uthi: “Lo R30 ukhokhelwa ukuthi sikwazi ukumelana nezindleko zokusebenza kwe-iCruiseS App.”
Uthi sebeqalile ukwenza imizamo yokuphucula ukusebenza kwewashi, wanxusa abangakwazi ubaxhase ukuze bafukule ibhizinisi labo ngokushesha.
“Esikufuna kakhulu wukuthola inkampani yonogada esizosebenzisana nayo ukwenza kube lula ukuthi umuntu osebenzisa leli washi asizakale uma kwenzeka edinga usizo oluphuthumayo,” kuphetha uNtuli.
Facebook: Izipho Zokuphila/Simphiwe Ntuli/Siyabonga Mngadi
Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noBhekani ‘uDankie’ Mthembu, umsakazi we-Intokozo FM nomphathi wenkampani yamaciko iNgoza Entertainment